आजसम्म कतिले भरे महिला लघुवित्तको आइपिओ? कति पर्ने भयो त? – Eps Sathi
February 14, 2021 865
महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको आइपिओमा करिब साँढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परिसकेको छ। बिक्री प्रबन्धकका अनुसार आइतबार ५ बजेसम्ममा ९ लाख ६३ हजार ८६८ वटा आवेदनबाट सो बराबरको शेयर माग भएको हो ।
यस कम्पनीको आईपीओमा १ करोड ४९ लाख ३५ हजार ९७० कित्ता अर्थात १ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । उक्त आवेदन सर्वसाधारणकालागि निष्काशन गरेको ३ लाख ७५ हजार कित्ताको ३९.८३ गुणा बढी हुन आउँछ ।
महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता आइपिओ निष्काशन गरिरहेको छ। यो कम्पनीको आइपिओ माघ ३० गतेदेखि खुलेको हो। फागुन ५ गतेसम्म यसको आइपिओमा आवेदन गर्न सकिनेछ। सुरुमा फागुन ४ गतेसम्म भर्न पाइने भनेर मिती तोकिएपनि गत शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि आइपिओ भर्ने समय १ दिन थपिएको हो। यदि ५ गतेसम्म पनि आइपिओ पुरै नबिकेमा फागुन १४ सम्म समय थप गरिनेछ। तर पहिलो दिनमै मागभन्दा बढि आवेदन परिसकेका कारण यो सम्भावना रहेको छैन।
आइपिओ खोलिएको ४ लाख कित्तामध्ये त्यसको ०.५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार कित्ता यसै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ। त्यसैगरी ४ लाख कित्तामा ५ प्रतिशतले हुन आउने सेयर म्युचुअल फण्डहरुका लागि छुट्याइएको छ। म्युचुअल फण्डहरु र कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइ बाँकी रहने ३ लाख ७५ हजार कित्ताभने सर्वसाधारणका लागि बाँडिने छ। महिला लघुवित्तको आइपिओ निष्काशनकर्ताका रुपमा एसबिआइ मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा न्युनतम १० कित्ता तथा अधिकतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।
महिला लघुवित्तको आइपिओलाई रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी’ प्रदान गरेको छ जसले बित्तिय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
आवेदनकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरोशेयर वेवसाईट तथा एप्सको प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।
हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ छ। यस ४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशनपश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।
गत आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिशेयर आम्दानी ५८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको यस लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो आम्दानी ५१ रुपैयाँ २३ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। लघुवित्तको प्रतिशेयर नेटवर्थ गत आर्थिक वर्ष ३१३ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा २९४ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
Prevअपि पावर कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत
Nextकोरियामा १० लाख रोजगारी गुम्यो